China Triethyl Phosphate ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | ကံဇာတာ
Triethyl phosphate စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနှင့်အတူ Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd, သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးသော triiethyl phosphate ထုတ်လုပ်သူများအနက် 78-40-0, ethyl phosphate, phosphoric ether, tep ကို၎င်း၏စက်ရုံမှဝယ်ယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
1.Synonyms: Ethyl ဖော့စဖိတ်; TEP; Phosphoric Ether2.Molecular ဖော်မြူလာ: (CH3CH2O) 3PO 3. မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၈၂.၁၄၆.CAS အမှတ်။
အသွင်အပြင် Achromatic ပွင့်လင်းအရည်
အက်စစ်တန်ဖိုး (mgKOH / g) 0.05max
အက်ဆစ် (H3PO4% ကဲ့သို့) 0.01max
အလင်းယိုင်အညွှန်းကိန်း (nD20) 1,4050 ~ 1,4070
သိပ်သည်းဆ D2020 1,069 ~ 1,073
6. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုသဘောသဘာဝ - ၎င်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအရည်ဖြစ်သည်။ -56.5 အရည်ပျော်မှတ်။ ; ဆူပွက်အမှတ် 215 ~ 216 '; flash point 115.5 ℃; ဆွေမျိုးသိပ်သည်းဆ 1.0695 (20 ℃); အလင်းယိုင်အညွှန်းကိန်း (20 ℃) ​​1.4055 ။ အပြည့်အဝရေထဲမှာပျော်။ အော်ဂဲနစ်အီသနော၊ အီသိုင်းအီ၊ ဘင်ဇင်စသည်တို့ကိုအလွယ်တကူပျော်ဝင်နိုင်သည်။ အသုံးပြုခြင်း: PAR တင်းကျပ်သောအမြှုပ်များနှင့် thermosets များကိုမီးငြိမ်းသတ်နိုင်သောပလပ်စတစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ synthesis.8 တွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်း - 200kgs / iron drum; 1000kgs / IB ကွန်တိန်နာ; 20-23MTS / ISOTANK
Triethyl phosphate စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနှင့်အတူ Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအလွန်ထူးခြားသော triethyl phosphate ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအကြား, သင်သည်၎င်း၏စက်ရုံမှ triethyl phosphate အမြောက်အများကိုသင်ဝယ်ယူရန်စောင့်နေပါတယ်။